လူငယ်များအတွက်အားဆေးတစ်ခွက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လူငယ်များအတွက်အားဆေးတစ်ခွက်…
မင်္ဂလာရှိသော မြန်မာသက္ကရဇ် ၁၃၇၃ ခုနှစ်မှာ ဂေဇက်မှသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူရွာသားအပေါင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေ။
ကျနော်ဂေဇက်မှာ ပိုစ့်မရေးဖြစ်တာကြာပါပီ။ယခုရေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးဟာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှာရှိနေကြတဲ့ ညီငယ်၊ညီမငယ်လေးများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကျပီးမိမိကိုမိမိအားမလို အားမရဖြစ်နေကြတဲ့သူများတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာမည်သူ့ကိုမှ ဆရာလုပ်လိုစိတ်လည်းမရှိပါ။မိမိကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့သောဘဝနဲ့ အတွေအကြုံလေးတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။လာမည့် စက်တင်ဘာလမှာ ကျနော်အသက်(၄၀)ပြည့်ပါတော့မယ်။ကျနော်အသက်(၁၉)အရွယ်မှစ၍ အနှစ်(၂၀)အတွင်းကြုံတွေ့သမျှ ဗဟုသုတလေးများကို လူငယ်များအတွက်မက်ဆေ့လေးတစ်ခုအဖြစ်ပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့လူငယ်လေးများ၊များသောအားဖြင့်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့ ဘဝအပေါ် အားမရ၊အားမရှိဖြစ်နေကြတာကို ကျနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော၊ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ သူတွေရော အွန်လိုင်း စာမျက်နှာပေါ်က အရေးအသားတွေ၊ကဗျာလေးကတဆင့်သိလာရပါတယ်။ဒါကြောင့် စာလေးနည်းနည်းလောက်ရေးချင်တဲ့စိတ်များပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချို့က ငါကဘွဲ့လည်းမရ၊စာလည်းမတတ်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ အားငယ်သိမ်ငယ်နေကြပါတယ်။
ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့(သို့)ချမ်းသာဖို့အတွက် ကံ၊ဉာဏ်၊လုံးလ၊ဝီရိယ၊ဇွဲ ဆိုတဲ့ အခြေခံကုန်ကြမ်းတွေကို အချိုးညီစွာနဲ့ အသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ငါကပညာလည်းမတတ်၊အရင်းနှီးလည်းမရှိဘူးဆြိုပီး၊ စိတ်ပျက်အားငယ်နေမဲ့အစား၊ငါဘယ်လို ဒီဘဝကနေရုန်းထွက်မလဲဆိုတာ အရင်ဆုံးစဉ်းစားပါ။အမေရိကန်သမတကြီးလင်ကွန်းဟာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ပါ။ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာနေသော သန်းကြွယ်သူဠေးကြီးများအားလုံးဟာလည်း ဘွဲ့ရပညာတတ်ကြီးတွေပဲမဟုတ်ပါ။သူတို့ဟာ အသုံးချနည်းပညာတွေနဲ့ ဇွဲ၊လုံ့လ၊ဝီရိယ အားတွေကိုအသုံးပြုပြီး တိုးတက်ကြီးပွါးချမ်းသာလာကြတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေး စပါမယ်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၂၀)လောက်က ကျနော် (၁၉)နှစ်သားအရွယ်မှာ မိဘများကောင်းမူနဲ့ နှိင်ငံခြားမှာ သင်္ဘောသွားတက်မယ့် အချိန်၊ကျနော်တို့အိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ကားဝက်ရှော့လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီမှာ အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်သင်အနေနဲ့ တောက်တိုမယ်ရ လုပ်ပေးနေရသူလေးတစ်ယောက်ပါ။ထိုဝက်ရှေ့ာဆိုင်ရှင်အပြင် အားလုံးရဲ့ခိုင်းဘက်လေးပါ။အဲဒီလိုနဲ့ ကျနော်လည်း နှိင်းငံခြားရောက် စင်္ကာပူမှ သင်္ဘောတက်၊အပျော်ကြီးပျော်၍ ဂုဏ်ယူနေချိန်ပါ။အဲဒီထဲမှာ ကျနော့်အစွမ်းအစဘာမှမပါသေးပါဘူး၊မိဘကပိုက်ဆံထုတ်ပေး၊စင်္ကာပူမှာရှိနေတဲ့ဦးလေးက သင်္ဘောပေါ်တင်ပေးလိုက်လို့ သကောင့်သားလွယ်လွယ်ကူကူသင်္ဘောပေါ်သို့ရောက်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲ သင်္ဘောပေါ်ကနေ ဆင်းလိုက်တက်လိုက် အပျော်ကြီးပျော်ပီး အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ အသက်တွေကြီးသွားတာကိုမေ့လို့နေပါတော့တယ်။(၅)နှစ်လောက်ကြာတော့ အခွန်တောင်မကျေသေးပဲ ပြည်တော်ပြန်ရောက်လာပါတော့တယ်။
အဲ..ဒါပေမယ့်…ကျနော်ဇတ်လိုက်..ဝက်ရှော့က အလုပ်သမားလေးက ဆရာအဆင့်နီပါးရောက်ရှိနေပါပီ။သူ့ရဲ့ ဆိုင်ရှင်ကမျက်နှာလွဲထားလို့ရနေပါပီ။အဲဒီလို့နဲ့ ကျနော်လည်း လေးငါးခြောက်လကြာတော့ အမေ့ဆီက ရှိတာလေးတွေရောင်းပီး နောက်ထက်တစ်ကြိမ်ရွက်လွင့်ဖို့ ရွေပြည်တော်ကြီးမှပြမ်လည်ထွက်ခွါလာပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ်(၅)နှစ်ပြည့်ပြန်တော့၊ပြည်တော်ပြန်ရပြန်သပေါ့။။။ပါလာတာလေးနဲ့ တိုက်ခန်းဝယ်၊ကားလေးဝယ် ပြီးတော့ ရှာပုံတောထွက်ပါတော့တယ်။ထိုလူငယ်လေးကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ရှော့လေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေပါပီ။သူ့ရဲ့ ရိုးသားမူ၊ကြိုးစားမူတွေရဲ့ ရလဒ်ပါ။ထိုနောက် ကျနော်လည်းထုံစံအတိုင်း ပါလာလေးကုန်တော့ ရွှေပြည်တော်ကြီးမှ တတိယံပိ ပြန်လည်ထွက်ခွါလာပါတယ်။
နောက်ထပ်ငါးနှစ်ကြာသော်….ထိုသူငယ်မှာ ဇနီး၊သားသမီးများနှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ကားနှစ်စီး အလုပ်သမားများနှင့်အောင်မြင်စွာတွေ့ရပါတော့သည်။
ထို့အတူမန္တလေးမှ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်သည်လည်း တစ်ချိန်က ကွမ်းယာရောင်းခဲ့ဘူးသူဖြစ်ကြောင်း သူ့ဘဝကို သူနှင့်တွေသူတိုင်းကိုပြန်ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။သူ၏ဘဝ အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းလာရပုံကိုလည်း သူ၏ဆိုင်များတွင် အမှတ်တရဓါတ်ပုံများချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျပြီး အားငယ်နေမယ့်သူများ မိမိတို့၏ဘဝအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ခွန်အားတွေက ိုမွေးမြူကြပါစို့။
လူငယ်များအတွက် အားဆေးလို့ ပြောမယ့်အစား ဘဝအတွက် အားဆေးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ရိုးသားမှုရယ်၊ ကြိုးစားမှုရယ်ပေါင်းမှ ပစ္စည်းကောင်းရတယ်လို့ ကြော်ငြာတစ်ခု ပြောသလို ဘဝကောင်း (တည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့ဘဝ) တစ်ခုရဖို့ ရိုးသားမှုရယ်၊ ကြိုးစားမှုရယ် လိုပါတယ်။ ပညာတတ်တာ၊ အရင်းအနှီး ရှိတာတွေပေါင်းရင်တော့ ပိုလို့တောင် ကောင်းလာမှာပေါ့။
ရိုးသားမှုရယ်၊ ကြိုးစားမှုရယ်၊ စေတနာရယ်ပေါင်းလိုက်ရင် ချမ်းသာသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မနေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူဌေးတော်တော်များရဲ့ ဘဝအစက လမ်းဘေးမှာ ဈေးချရောင်းခဲ့ဖူးသူများဖြစ်ပါတယ် …
ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ ခပ်လွယ်လွယ်ချမ်းသာသွားသူများကတော့ ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ စီးပွားပြန်ပျက်သွားကြတာ တွေ့နေရပါတယ် …
ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလက်ဆောင်.. ကျွန်တော့် အဖေက ပြောဘူးတယ်..ပိုက်ဆံ ၅၀ဝရှိရင် စတိုးဆိုင်ကြီးထောင်မဲ့သူက ပိုက်ဆံစုနေတာ သေတာသွားတယ် .. စတိုးဆိုင်ကြီး မထောင်ဖြစ်ဘူးတဲ့.. ရှိတာလေးနဲ့ စတင်ကြိုးစားမှ. အောင်မြင်မူ့ ဆိုတာ ရနိင်မှာပါ ..ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသေးတယ်ပြောနေကြတာ.. အရင်းအနှီးမှ မရှိတာဆိုတဲ့စကား…………….
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ကံကြမ္မာက အကျင့်မကောင်းဘူး … ။
ကြိုးစားတိုင်းလည်း မျက်နှာသာ မပေးဘူး … ။
ဘယ်လောက်ကြိုးစား ကြိုးစား အဆင်မပြေဘူးဖြစ်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ လူတယောက်ကို ကျမတွေ့တဲ့အခါ… စိတ်မကောင်းဖြစ်ယုံနဲ့ အားပေးစကားပြောယုံကလွဲလို့ … ဘာမှ မကူညီနိုင်ဘူးလေ… ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်စားတဲ့ လူတွေက ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက်နက်လာတယ်… ကလိမ်ကကျစ်လုပ်စားတဲ့လူတွေကတော့ နေ့ချင်း ညချင်း တိုက်တွေ ၊ ကားတွေ တသီကြီးဖြစ်လာတယ်… ။
ရှု့ဒေါင့်တခုကပြောရရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရတာ ရေတွင်းတူးရသလိုပဲ….
မတူးခင် ရေမြေအနေအထားတွေကို ကျေနပ်လောက်အောင်လေ့လာ …
ကြိုက်လို့တူးပြီဆိုမှဖြင့် ရေမထွက်မချင်း ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ အချိန်ပေးတူးဖို့လိုပါတယ်။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ ကျေနပ်လောက်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့ နှစ် ၂ဝ လောက် အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ စိတ်ဓါတ်မကျဘို့ ၊ ဝီရိယမလျှော့ဘို့ ၊ စိတ်ဓါတ်နဲ့စာရိတ္တတွေ မပျက်ပြားသွားဘို့၊ ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်တွေ မတိမ်းစောင်းသွားဘို့ လိုတယ်။
ယထာလာဘ -ရနိုင်တာနဲ့ ရောင့်ရဲခြင်း ( မရနိုင်တာအတွက် ကိုယ်စိတ် အဆင်းရဲမခံခြင်း)
ယထာဗလ – စွမ်းနိုင်သလောက်နဲ့ရောင့်ရဲခြင်း ( မလုပ်နိုင်တာတွေအတွက် ကိုယ်စိတ် အဆင်းရဲမခံခြင်း)
ယထာသာရုပ္ပ – သင့်တော်တာနဲ့ရောင့်ရဲခြင်း ( မသင့်တော်တာတွေအတွက် ကိုယ်စိတ် အဆင်းရဲမခံခြင်း) …..တဲ့
သုံးတတ်ရင် ဆေး … လို့
ဝိုင်းဝန်းဖြည့်စွပ် အကြံပေးသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အဘိဓမာထဲမှာပြောတာကတော့ -အခုကောင်းတာရှေးကကောင်းခဲ့လို့၊ အခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမည်တဲ့။စေတနာမှန်သောကံတရားတဲ့၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းစေလိုတဲ့စေတနာရှေ့ထားပြီးလုပ်ပါ၊ တဖြေးဖြေးကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
အဘဖောရဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်(၄၀) ရဲ့ သင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ထိုက်တန်ပါသလား ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို အားပေးထောက်ခံရင်း အဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်လည်တူးစွပေးလိုက်ပါတယ်…
မတူညီတာလေး တွေရှိပေမယ့် တူညီတာလေးတွေနဲ့ ရှေ့သို့ ဆက်လက်ချီတက်ကြပါစို့…